लकडाउन खुलेपछि सरकारलाई खवरदारी गर्न सडक नाटक प्रदर्शनको तयारीमा शिल्पी थिएटरका रंगकर्मीहरु । तस्विर सौजन्यः शिल्पी थिएटर
रङ्गकर्मी केदार श्रेष्ठ ३ महिनापछि आफ्नो थिएटर पुगे । थिएटर मल– कीर्तिपुर रङ्गमञ्च । भवनवरिपरि झार उम्रिएका थिए, विभिन्न स्थानमा परेवाले गुँड लगाएछन् । मन गह्रुंगो र उदास भयो उनको । दिनभरि सरसफाइ गरे । ४ महिनाअघि भित्तामा टाँसेको कार्यतालिकामा नजर पर्‍यो । अग्रसूचीमा थियो नाटक– ‘बहुलाकाजीको सपना’ । सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने अघिल्लो सालको अन्तिममै प्रदर्शन सकिइसक्ने नाटक रिहर्सलबाटै स्थगित भयो । ‘त्यसपछि वैशाखको नाटक, जेठको फिल्म फेस्टिभल लगायतका धेरै सूची अधुरै छन्’, केदार सुस्केरा हाल्छन् ।
लकडाउन हुनुअघिका नाटकमा उपस्थित दर्शकबाट केदार उत्साहित थिए । विशेषतः ‘जामुनको रुख’ मञ्चन हुँदाको दर्शक संख्या उनलाई चित्त बुझेको थियो । तर पहिलो वर्षमा उत्साहसहित बामे सर्दै गरेको कीर्तिपुर रङ्गमञ्चलाई महामारीले अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । ‘झार उम्रिएको त उखेलेँ, सफा भयो । तर, प्रकोपलाई न छेक्न सकिन्छ न रोक्न’, उनको स्वरमा चिन्ता मिसिएको थियो ।
बत्तीसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरको पनि धेरै योजना कोरोना प्रकोपका कारण स्थगित भयो । शिल्पीले लकडाउनअघि स्कुलका विद्यार्थीका लागि नाटक तयार गरेको थियो, दुइटा नाटक रिहर्सलको लागि तयारीमा थियो । ‘सबै स्थगित गरेर हिँड्नुपर्यो, आर्थिक समस्या पनि ठूलै व्यहोर्नुपर्‍यो’, शिल्पीका संस्थापक रङ्गकर्मी घिमिरे युवराज भन्छन् ।
टेकुस्थित कौसी थिएटरकी संस्थापक रङ्गकर्मी आकांक्षा कार्की जर्ज अरवेलको उपन्यासमा आधारित रहेर ‘एनिमल फार्म’ नाटक मञ्चन तयारीमा थिइन् । जसको रिहर्सलका साथै लगानीसमेत निश्चित भइसकेको थियो । तर, लकडाउनको कारण न लगानी सुरक्षित हुन सक्यो, न रिहर्सलकोे काम नै अघि बढ्यो ।
कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालमा देखिएपछि यसरी नै रङ्गमञ्च नराम्ररी प्रभावित भएको छ । रङ्गमञ्च व्यावसायिक बन्दैछ भनेर उत्साहित रङ्गकर्मीमा स्वाभाविक निराशा छाएको छ । अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरकी अध्यक्ष रङ्गकर्मी सिर्जना सुब्बा भन्छिन्, ‘अब कतिपय थिएटर बन्द हुन्छन् जस्तो लाग्छ । पहिले पनि थिएटर हल कठिनाइले चलिरहेका थिए । भाडा तिर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, अब त सिकिस्त नै पर्ने भयो ।’ अधिकांश थिएटर हलको भाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा छन् । आम्दानी शून्य छ । ‘यो कठिनाइसँग जुध्न निकै सकस भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि रङ्गमञ्च बन्दै थिए, जसले विकेन्द्रीकरणको उत्साह थपिएको थियो । तर महामारीको प्रभावले त्यसमा पनि ‘ब्रेक’ लागिरहेको छ । पोखरा थिएटर, पोखरा नाटकका साथै फिल्म महोत्सवको तयारीमा जुटेको थियो । तर, कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले सबै योजना भंग भएको थिएटरका अध्यक्ष रङ्गकर्मी परिवर्तन बताउँछन् । ‘नाटकघर बनाएर २ वर्षअघि नाटक सुरु गरेका थियौं । भर्खरै लय समातेको रङ्गमञ्चमा एउटा प्रलय आएको महसुस हामीलाई भएको छ’, उनले दुःखेसो पोखे ।
लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे उनको टिम चिन्तित छ । ‘सधैं अभावमा गुज्रिरहेको थिएटरमा झनै अभावले थिचिदिएको छ । लामो समय थिएटर बन्द हुँदा सञ्चालन खर्च बढिरहेको छ । जसले ऋणको भार थपिदिएको छ’, उनले भने ।
दमकको कदम थिएटर संकटबीचमा पनि बनिरहेको छ । रङ्गकर्मीहरू हल निर्माणमा जुटिरहेका छन् । लकडाउनपछि धेरै योजना बुनेको हुँदा यसै बीचमा हल तयार गर्न लागेको रङ्गकर्मी सिजन दाहाल बताउँछन् । सिजन लकडाउनअघि ‘बाछिटा’ नामक नाटकको तयारीमा जुटेका थिए । ‘तोकिएको मितिको तीन दिनअघि नाटक रोक्नुपर्यो । अरू वर्कसप पनि ठप्प भयो’, उनले जानकारी दिए । निर्माणकै सुरुवाती अवस्थामा रहेको हुँदा थिएटरले आर्थिक संकट नराम्ररी व्यहोर्नु परेको उनले सुनाए ।
लकडाउन खुलेपछि थिएटर मल किर्तिपुरको प्राङगन । तस्विर सौजन्य थिएटर मल किर्तिपुर
कसरी फर्किएलान् दर्शक ?
रङ्गमञ्च सुचारु हुन दर्शक पहिलो सर्त हो । महामारीका कारण निर्माण भएको मनोविज्ञानका कारण दर्शक छिट्टै फर्किने कुरामा रङ्गकर्मीलाई आशंका छ । रङ्गकर्मी सुब्बा अवस्था सामान्य भए पनि दर्शक फर्कन २ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘अब दुई–चार वर्ष त दर्शक स्वभाविक रूपमा कम हुन्छन् । किनकि, लकडाउनपछि पनि धेरैको प्राथमिकतामा थिएटर पर्दैन ।’
यसैबीच पनि नाट्य निर्देशक विमल सुवेदी भने अवस्था सामँन्य भए बिस्तारै रङ्गमञ्च सुचारु गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘थिएटरमा कसरी फर्किने भनेर छलफल भइरहेको छ । सुरक्षामा ध्यान दिएर काम गर्न नसकिने होइन । हामी दसैं आसपासबाट काम सुरु गर्ने योजनामा छौँ ।’ पहिलेको तुलनामा कम दर्शक आउने भएकाले त्यहीमबोजिम स्वागत गर्ने गरी थिएटरको संरचना बनाएर काम गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
लकडाउन नै कहिलेसम्म जाने भन्ने अनिश्चित भएकाले शिल्पीका युवराज भने थिएटरभित्र गतिविधि गर्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो योजना खुला रङ्गमञ्चमा कसरी जाने र सर्वसाधारणमा कसरी अशा जगाउने भन्नेतिर केन्द्रित छ । तर, त्यो पनि निश्चित छैन ।’ दसैंसम्ममा मानिसहरू बाहिर निस्कने अवस्था भयो भने त्यसको ६ महिनापछि थिएटर सञ्चालन गर्न सकिने उनको अनुमान छ । यद्यपि, पुरानै गतिमा फर्कन भने धेरै समय लाग्ने उनी बताउँछन् । ‘मनोवैज्ञानिक रूपमा रङ्गकर्मी र दर्शक तयार हुन समय लाग्छ । अर्कोचाहिँ आर्थिक रूपमा निकै ठूलो क्षति भएको छ । र, संकटको बेलामा ज्यान बचाएर गर्न सक्ने काममा राज्यको अभ्यास नै छैन’, उनी भन्छन् ।
अहिलेको परिस्थितिमा दर्शक फर्काउने हतारो गर्न पनि नहुने रङ्गकर्मी आकांक्षाको तर्क छ । उनी सुझाउँछिन्, ‘विदेशतिर के गर्छन् त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ । आफूले मनोमानी खोल्नु उचित हुन्न ।’ अहिले रङ्गमञ्चको विकल्प भन्दा पनि आम्दानीको विकल्पमा रङ्गकर्मी लाग्नुपर्ने तर्क उनको छ । ‘अहिले आम्दानीको विकल्प खोजेर रङ्गमञ्चलाई पछि पुनर्जागरण गरौं’, उनी भन्छिन्, ‘संसारभरि थिएटर रोकिएर फेरि जागरण भएको इतिहास छ । डिजिटल समयमा मानिसहरू थिएटरबाट टाढिए पनि पछि फर्किएका छन् ।’
भर्चुअल विकल्पमा बहस
रङ्गमञ्च लामो समयसम्म सञ्चालन नहुने अवस्था रहिरहे के गर्ने ? डिजिटल प्ल्याटफार्मको अभ्यास नाटकमा सम्भव छ ? अहिले प्रश्न उठेको छ । न्युजिल्याण्ड, क्यानडालगायतका देशका अभ्यास हेर्ने हो भने पनि थिएटरमा नाटक देखाएर बोर्डकास्ट गर्नेलाई राज्यले नै आर्थिक सहायता गरिरहेको छ । तथापि नेपालमा भने यस विषयमा प्रारम्भिक बहसमात्रै छ, त्यही पनि रङ्गकर्मीबीच । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो मत छ– रङ्गमञ्चमा गरिने नाटक भर्चुअल माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दा रङ्गमञ्चकै मर्म मर्छ ।
लकडाउनको बेलामा थिएटर मल, कीर्तिपुरले भर्चुअल माध्यमबाट पुराना नाटकको स्ट्रिमिङ गरेको थियो । केही समयलाई उपयुक्त भए पनि त्यो निरन्तर रङ्गमञ्चीय अभ्यास भने हुन नसक्ने मलका निर्देशक केदार श्रेष्ठलाई नै लाग्छ । ‘कति साथीहरूले फेरि पनि भर्चुअल गर्नुस् भनेर आग्रह गर्नुहुन्छ । तर, त्यो सम्भव छैन’, केदार भन्छन्, ‘हामीले देखाएको नाटक पुराना हुन्, जुन मञ्चन भइसकेका थिए । नयाँ सिर्जना गरेर प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन ।’
कौसी थिएटरका रंगकर्मीहरु जर्ज अरवेलको उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ नाटक मञ्चनको तयारीमा । तस्विर सौजन्य कौसी थिएटर
कौसीकी आकांक्षा पनि भर्चुअल मध्यमबाट गरिएको नाटकको कुनै अर्थ नहुने मत राख्छिन् । ‘बरु फिल्म बनाउन सक्छौँ, तर भर्चुअल नाटक गर्नु भनेको रङ्गमञ्चको मर्ममात्र मार्नु हो’, उनी तर्क राख्छिन्, ‘तपाईं एउटा मान्छे रोएको, हाँसेको फिल गर्न सक्नुहुन्छ, तर धड्कन फिल गर्न सक्नुहुन्न । त्यस्तै हो, भिडियोले रङ्गमञ्चलाई देखाउन सक्दैन ।’
भर्चुअल माध्यम थिएटरको विकल्प हुन नसक्ने मतमा सिर्जना पनि सहमत छिन् । ‘नाटकको आत्मा भनेको थिएटर हो । प्रत्यक्ष गएर दर्शकले हेर्नुमा नै यसको अर्थ हुन्छ,’ उनले भनिन् । तथापि, परिस्थितिले माध्यमका विकल्पबारे बहस गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भने गरिदिएको छ । त्यसका लागि बहस र तालिम दुवैबारे सोच्नु पर्ने रङ्गकर्मी सिजन बताउँछन् । ‘हामीले थिएटरको साटो रेडियो नाटकको तयारी गरिरहेका छौं । ताकि थिएटर गर्न नसकुन्जेल घरमै बसेर रेडियोमार्फत् नाटक सुन्न सकियोस्’, उनले भने ।
लकडाउनलाई समस्यामात्र हैन, कतिपय रङ्गकर्मीले अवसरको रूपमा पनि लिएका छन् । ‘हामी सधैँ हतार र दौडधुपमा हुन्थ्यौँ, आफूलाई चिन्न पनि सकिएको थिएन । अहिले आफूलाई चिन्ने र थिएटरबारे अध्ययन गर्ने मौका धेरै पाएका छौँ,’ रङ्गकर्मी इस्टु कार्की भन्छिन्, ‘अनुशासन भन्ने कुरा लकडाउनको बीचमा मैले अझै सिकेँ । यसले मेरो रङ्गकर्मलाई मद्दत गर्छ ।’
रङ्गकर्मी राजन खतिवडा पनि यतिबेला नाटकलाई मौलिक र सुन्दर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । ‘केही लेखकसँग नाटकबारे बहस गर्दै बारम्बार भेटिरहेको छु । नाटक लेखाउन बल लगाइरहेको छु’, उनी बताउँछन्, ‘अहिले मानिसहरू जुन ट्र्यापमा परेका छन्, त्यसलाई भत्काउने खालको नाटक बन्नुपर्छ । हामी फेरि उठ्छौँ, काम गर्छौं । आशा छ, यो समयले नाटकमा नयाँपनलाई निम्त्याउँछ ।’
निर्देशक विमल सुवेदी पनि अब नयाँ र भिन्न तरिकाले काम गर्न खोजिरहेको बताउँछन् । यसबीचमा धेरै रङ्गकर्मीको चेतनाको स्तर र काम गर्ने तरिकामा सुधार आएको उनको आँकलन छ । ‘म आफैं नयाँ अपडेट र सिकाइमा लागिपरेको छु ताकि प्रस्तुतिमा नयाँपन र मौलिकता आओस्’, उनी भन्छन्, ‘आर्ट कल्चरमा हामी धरै पछाडि छौं । अबको अवस्थामा फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । आशा छ, अब नाटकमा परिवर्तन आउँनेछ ।’